कमेडियनसँग हिरोइन - मनोरञ्जन - नेपाल
हिरोइन दीपिका प्रसाईं यतिबेला फुरुंग छिन् । नहुन् पनि किन ? व्यावसायिक रेकर्ड राख्न सफल छक्का–पञ्जा टिमसँग जोडिन जो पाएकी छन् । छक्का–पञ्जा ३ मा दीपिका औपचारिक रुपमा अनुबन्ध भएकी हुन् । तर, रमाइलो पक्ष उनको सफलताको कारण साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह हुन् । किनभने, छक्का–पञ्जा युनिटले सुरुमा साम्राज्ञीलाई प्रस्ताव गरेको थियो तर उनको बेवास्तापछि दीपिकाले अवसर पाएकी हुन् । दीपिका उनै हिरोइन हुन्, जसको पहिलो फिल्म ऐश्वर्यले औसत व्यापार गरे पनि अन्य फिल्ममा देखिएकी थिइनन् । हास्य कलाकारको भीड रहने छक्का–पञ्जा ३ मा मौलिक पहिचान बनाउन दीपिका सक्षम होलिन् त ? ध
प्रकाशित: वैशाख २७, २०७५